Nhau - Yakagadziriswa kabhoni adsorption bhokisi yekuchengetedza nharaunda michina
Iyo inodzivirira kupisa michina inogadzirwa neHangzhou lvran yekuchengetedza nharaunda midziyo kunyanya ine yakaomeswa kabhoni adsorption yevasungwa michina, chinobatsira kupisa michina uye yemagetsi kudzora mudziyo. Catalytic combustion michina yakagadzirirwa maererano nemitemo miviri yekushambadzira (yakanyanya kushanda) uye inomutsa kupisa (simba rekuchengetedza). Sezvazviri, kushambadzira kwevasungwa nzira inosimudzira kupisa nzira.
Iyo inodzivirira kupisa michina inotora yakawanda gasi nzira dzekuenderera kushanda, akawanda akaomeswa kabhoni adsorption mabhokisi eimwe mashandiro, uye imwe inobatsira yekupisa mukamuri. Yekutanga yakamisikidzwa kabhoni adsorption tangi inoshambadza iyo gasi remarara. Kana yave kuguta, mira iyo adsorption oparesheni uye nekukurumidza ita iyo desorption kurapwa. Panguva imwecheteyo, yechipiri yakamisikidzwa kabhoni adsorption tangi inoshandiswa kushambadza uye kuisa pfungwa. Kana yave kuzara, iyo adsorption oparesheni inomiswa uye yakatemwa desorbed nekukasira. Zvinoenderana nekufananidza uku, anotevera maseti akati wandei akaomeswa kabhoni adsorption mabhokisi anoita zvakafanana kushambadzira uye desorption maitiro seyekutanga seti yakaitwa kabhoni adsorption mabhokisi. Iyo yakasiyiwa gasi yemarara gasi yakaiswa (iko kusungwa kwakapetwa kazhinji zvakapetwa kupfuura kwepakutanga) uye ndokutumirwa kukamuri rinopisa remoto kune unobatsira kupisa. Iyo inokonzeresa oxidation reaction inoitwa pane iyo inokonzeresa pane yakanyanya tembiricha ye250-350 ℃, ndokuti "kupisa", kuitira kuti organic organic gasi ishandurwe ive isina kukuvadza CO2 uye H2O yekubuda. Kana iyo girisi yemarara gasi yasvika inopfuura 2000 ppm, iyo gasi yakasviba gasi inogona kuchengetwa yakasarudzika mumubhedha unobatsira pasina kupisa kwekunze, uye yakawanda yemuswe gasi mushure mekutsva inoburitsirwa mudenga.
Mugadziri wemagetsi anobatsira kupisa
Catalytic combustion michina imhando yemarara gasi ekurapa michina iyo inoshandisa zvinokonzeresa kuti iwedzere uye kuora zvinhu zvinopisa mumarara gasi pane yakaderera tembiricha. Catalytic combustion michina yakakodzera yekuenderera marara gasi kurapwa uye kunatswa. Kana ichishanda zvakatenderedza, kwete chete simba rekushandisa rinodiwa kune yega preheating, asi zvakare kupisa kupisa hakugone kudzokororwa, izvo zvinokonzeresa simba guru rekurasa. Naizvozvo, kana uchisarudza chinogonesa kupisa michina, mafekitori anofanirwa kufunga nezve mashandiro emabhizinesi zvizere.
Hangzhou lvran yekuchengetedza nharaunda michina yakabudirira kugadzira chinogadzikana kupisa michina ine yakanyanya kuchenesa kushanda, kuchengetedza simba uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza nekutora ruzivo rwehunyanzvi kumba nekune dzimwe nyika. Green inomhanya inobatsira yekumisikidza michina yave ichibudirira munzvimbo dzese dzenyika, uye girini inomhanya inokonzeresa kupisa michina inowanikwa ipapo. Green yakamhanya kuburikidza nekuenderera mberi nekuvandudza kwemasevhisi avo uye hunyanzvi, chete nekuda kwekuvimba kwako uye rutsigiro.
Post nguva: Oct-30-2019
Yakakwira Pressure Centrifugal Fan, Fume Kukwesha, Centrifugal mutsinga dzinofamba nemukaka Fan, Radial Nereza Centrifugal Fan, Imwe Inlet Centrifugal Fan, Pedza Fani,